Wararka - Ashine waxay ka qaybgashay Shirkii Ugu Horeeyay ee Virtual ah oo ay la yeelatay ASCC
Xubin cusub oo ka socda ASCC oo ka socda Shiinaha, Jack Wang oo ka tirsan Ashine ayaa ka qaybgalay ASCC kulankeedii ugu horreeyay ee sannadlaha ahaa ee Sebtember 21, 2020.
Shirka sanadlaha ah ee ASCC ayaa shalay si rasmi ah u furmay. Saamaynta cudurrada faafa, shirka sanadlaha ah ee ASCC wuxuu qaatay qaabkii kulanka fiidiyaha Zoom. In kasta oo dadku si fool ka fool ah ugu hadli karin si caadi ah, laakiin iyada oo loo marayo kaamerada ayaa sidoo kale gudbisay dareen isku mid ah oo midba midka kale ka dhexeeyo.
Bishii Maarj 1, 2020, soo -saarka aaladaha dheemanka Ashine wuxuu xubin ka noqday ASCC, taasi waxay ka dhigan tahay inaan heli karno fursado badan oo aan ku abuuri karno xiriir iyo is -dhexgal khubaro warshadeed oo ka kala yimid adduunka oo dhan, gaar ahaan Mareykanka, kaas oo sidoo kale siiya taageero xooggan annaga si aan macaamiisha u siino xalal dhisme oo ka wanaagsan.
Dooddu waxay socotay muddo saddex saacadood ah, iyadoo diiradda lagu saarayay sidii loo hagaajin lahaa cutubyada xubnaha si loo hagaajiyo farsamada dhismaha, la jaangooyo hirgelinta heerarka farsamada warshadaha, lagana doodo arrimaha farsamo ee khuseeya warshadaha sannadkii hore.
Ashine oo ah khabiir ku takhasusay dhul-goynta iyo nadiifinta dhulka, oo ah alaab-qeybiyaha aaladaha dheemanka, haddii aad qabto wax dhibaatooyin ah oo la xiriira, waxaan ku dadaali doonnaa inaan kugu taageerno xallintayada.
Kabaha shiidi la taaban karo, Kabaha Shiida Dheemanka, Kabaha Shiidi PCD, Trapezoids Kabaha Shiidi Dheemanka, Birta Ku Xidhan Dheemannada Shiidi Kara, Suumanka Nadiifinta La -taaban karo,